Apple kutsigira iyo 2017 Met Gala | Ndinobva mac
Apple inotsigira iyo 2017 Met Gala zvakare
Kunyangwe isiri chiitiko chinozivikanwa kunze kweUnited States, Met Gala, inonziwo Costume Institute Gala, chiitiko chekupa rubatsiro icho chinotanga kuratidzwa kwegore negore kweFashoni Institute yeMetropolitan Museum yeArt muNew York. Mari dzese dzinosimudzwa muiri gala dzinoenda kubhajeti reDress Institute. Kuita uku akanyanya kukosha manhamba kubva kune ese mafashoni nemumhanzi, firimu uye terevhizheni vanopinda. Chirevo chegore rino chaive Manu x Machina: Mufashoni muZera reTekinoroji. Nedingindira iri, zvine musoro kuti Apple itsigire chiitiko ichi.
Gore rinouya ichave zvakare nerutsigiro rweApple, sezvakataurwa nemagazini yeVogue, kunyangwe dingindira racho risina chekuita netekinoroji. Gore rinouya dingindira rinotenderera neRed Kawakubo / Comme des Carços. Kufarira kwaApple muchiitiko ichi kune chekuita neApple Watch sezvaakatoratidzira pachiitiko cheApple Watch makore maviri apfuura, achikoka huwandu hwakawanda hwemafashoni enhau.
Gore rapera Apple yakatanga iyo Apple Watch Edition, modhi yakagadzirwa ne18 karat goridhe izvo sezviri pachena hazvina kunge zvakabudirira sezvaitarisirwa nekambani. Iyi modhi yakatanga kubvisa, pasina kuita ruzha, zvese kubva kuzvitoro zvepanyama uye kubva kuchitoro chepamhepo, ichisimbisa kuti Apple yaida kupinda pamusuwo wepamberi wemafashoni nemodhodhi inongowanikwa kune vane mukurumbira chete.
Gore rino, zvine musoro kuti haina kuvhura iyo Edition vhezheni, yaive nemutengo wekutanga wemadhora zviuru gumi, asi pachinzvimbo, chero munhu anoda yemhando Apple Watch modhi, achafanirwa kusarudza iyo modhi yakagadzirwa nekriamic, iyo yakatengwa zvakanyanya zvakachipa, pakati pe1400 ne1600 euros, zvinoenderana nekuti iri 38 kana 0 mm uye nemhando yetambo yatinosarudza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inotsigira iyo 2017 Met Gala zvakare
Barcelona ichaita musangano weFCPX Tour mwedzi unouya
Apple inogona kuunza yakagadziriswazve USB-C adapta yeiyo MagSafe